मंसिरमा विवाह बन्धनमा बाँधिनु भयाे ? हनिमुन यसरी मनाउनुस् - नेपालबहस
मंसिरमा विवाह बन्धनमा बाँधिनु भयाे ? हनिमुन यसरी मनाउनुस्
| २०:०५:०८ मा प्रकाशित
१ पुस काठमाडौं । आज पुस महिनाको १ गते, यो बर्षको मंसिर महिना पनि सकियो । यसबर्ष विवाह बन्धनमा बाँधिएका नयाँ दम्पती तथा नवदुलहा-दुलही कुनै टाढाको सुन्दर ठाउँमा जान्छन् । यस्तो ठाउँ, जहाँ उनीहरू आफन्त, इष्टमित्र तथा छरछिमेकको आँखाबाट ओझेल हुन्छन् । मानौं, त्यो उनीहरूको आफ्नो संसार हो । कामधन्दा, करियर, नातागोता, ऋण–धन सबै भुलेर त्यहाँ दुवैले उन्मुक्त क्षणहरू बिताउँछन् । यस्तो क्षण, जहाँ दुवैले एक–अर्काको सामीप्य र आलिङ्गनमा मीठा–मीठा कुराकानी गर्न पाउँछन् ।
अन्तरङ्ग पल साट्न पाउँछन् । नजिकबाट एक–आपसको ढुकढुकी अनुभूति गर्न पाउँछन् । यही समयमा उनीहरू एक–अर्काको भावना, चाहना, इच्छा एवं सपना आपसमा बाँड्छन् । नयाँ घरजमको योजना बुन्छन् । कसरी दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाउने ? कसरी पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर राख्ने  ? कसरी घरलाई सुखी एवं समृद्ध बनाउने ? प्रेमिल क्षणमा उनीहरूले यस्तै खाका पनि कोर्छन् ।
यसैपटक विवाह गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि तपाईंहरू ‘मधुमास’ अर्थात् ‘हनिमुन’ को मुडमा हुनुहुन्छ । किनभने तपाईं आफ्नो दाम्पत्य जीवनको सुरुवात एक स्मरणीय क्षणबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ । यही क्षण कल्पेर तपाईंहरूले भोलिका दिन पारिवारिक जीवनमा आइलाग्ने कतिपय कटुता, मतभेद तथा अप्ठ्याराहरू भुल्नुहुनेछ । हनिमुन हरेक नव–जोडीका लागि एउटा उत्सव हो । दाम्पत्य जीवनलाई नजिकबाट बुझ्ने, अनुभूत गर्ने एवं आपसी सम्बन्धलाई कसिलो बनाउने अवसर हो ।
एक अनुसन्धानले पनि भनेको छ कि हनिमुन ‘एक–अर्कामा अनुबन्धन गर्ने, चिनजान गर्ने, मूल्य–मान्यता बुझाउने, आपसमा भावनात्मक रूपमा नजिकिने भएकाले नयाँ जीवन सुरुवात गर्न लागेका जोडीहरूका लागि सहजीकरण गर्छ । हनिमुनले पारिवारिक जीवनलाई सहज बनाउन भूमिका खेल्ने भएकाले अहिले नवजोडीलाई घर–परिवारले नै हनिमुनका लागि अनुकूलता मिलाइदिने गरेको छ ।
विवाहको थकान मेट्ने अवसर
त्यसैले नवदम्पतीहरू विवाहलगत्तै एक–अर्कासँग नितान्त निजीपल साट्न चाहन्छन् । विवाहको धपेडीबाट विश्राम लिने उपयुक्त बाहना पनि हो यो हो भने भोलिका दिनमा कसरी दाम्पत्य जीवनलाई अघि बढाउने भन्ने पूर्वतयारी पनि हो । त्यसैले विवाह लगत्तैको हनिमुन एउटा सुखद् सुरुवात हो ।
हनिमुन आवश्यकता कि रहर ?
हनिमुन वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका जोडीहरूका लागि महत्वपूर्ण पल हो । कामकाजी दम्पतीका लागि हनिमुन एउटा राम्रो अवसर हो । उनीहरूको दैनिक जीवन व्यस्त भएकाले एक–अर्कालाई समय दिन पाउँदैनन् । हनिमुन जाँदा थोरै समय भए पनि एक–अर्कालाई साथ दिन एवं बुझ्न पाइन्छ । मागी विवाह गर्नेहरूमा प्रायस् एक–अर्काको स्वभाव अलग हुन्छ । एक–अर्काको स्वभाव बुझे भावी जीवन राम्रोसँग बिताउन सकिन्छ ।
हनिमुन भनेको नयाँ दाम्पत्यको सुरुवात हो । हनिमुनलाई जतिसक्दो रोमाञ्चक तथा स्मरणीय बनाउनुपर्छ । भोलिका दिनमा हनिमुनका क्षणहरू सम्झिएर दम्पतीले आनन्दको अनुभूित गर्न सक्छन् । हनिमुनलाई स्मरणीय बनाउन दम्पतीले सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ । चाहे हनिमुन मनाउने गन्तव्यको छनोटमा होस् वा त्यहाँ बिताउने तौर–तरिकामा, केही नयाँपन हुनुपर्छ । जस्तो कि एकदमै नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेशमा जाने । त्यहाँका अनुभवहरू लिने तथा रैथाने परिकारहरू चाख्ने । घुमफिर गर्ने, मीठोमसिनो खाने, फोटो खिच्ने आदि ।
विवाह तय भएपछि नवदम्पतीले हनिमुनका लागि योजना बुन्न थाल्छन् । नेपालमा काठमाडौं, चितवनको सौराहा, पोखरा, भेंडेटार, कन्याम, मुस्ताङजस्ता गन्तव्य हनिमुनका लागि पनि उपयुक्त मानिन्छन् । केही वर्षअघिसम्म हनिमुन मनाउने जोडी देशभित्र मात्र सीमित थिए भने अहिले देशबाहिर पनि जाने चलन छ ।
ठाउँको जानकारी लिने ?
हनिमुन मनाउन जानका लागी सबै तयारी पुरा भएपछि कति खर्च लाग्छ भनेर हिसाब समेत निकाल्नुपर्छ । आफूसँग भएको बजेटअनुरूप योजना बनाउनुपर्छ । बाटोमा पैसा अपुग हुन सक्छ । बजेटअनुसार खर्च गर्दा कुनै समस्या पर्दैन । क्रेडिट कार्डका अतिरिक्त नगदसमेत बोक्नुपर्छ ।
सबै समय आफ्नो मान्छेलाई दिनुस
हनिमुनमा मोबाइल फोनको प्रयोग एकदमै कम गर्नुपर्छ । आवश्यक नहुँदासम्म मोबाइल प्रयोग नगर्नु नै उपयुक्त मानिन्छ । फोनमा लामो कुराकानी गर्नुहुँदैन । हनिमुनको समयमा वरिपरि अन्य नवविवाहित जोडी पनि घुम्न आएका हुन्छन् । उनीहरूलाई हेर्नुहुँदैन । त्यसबाट वैवाहिक जीवनको सुरुवातमै जीवनसाथीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । राम्रो देखिने चक्करमा धेरै अभिनय गर्नु वा लजाउनु राम्रो हुँदैन । आफ्नो व्यवहार जस्तो छ त्यस्तै रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ जसले दुवैलाई सहज बनाउँछ ।
घर वा अफिसको तनाव हनिमुनमा पर्न दिनुहुँदैन । तनावका कारण हनिमुनको लाभ उठाउन सकिँदैन । तनाव जति लिए पनि त्यसको हल निकाल्न सकिँदैन तसर्थ हनिमुनको आनन्दमा कमी आउन दिनुहुँदैन ।
लघुवित्तले माग्यो कर्मचारी, बैशाख १७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने १ मिनेट पहिले
दिल्लीका अस्पतामा अक्सिजनको अभाव, खेतबारीमै शवको अन्त्येष्टि गर्न अनुमति १ मिनेट पहिले
डोटीमा मृतावस्थामा भेटिएकी महिलाको पहिचान खुल्यो १० मिनेट पहिले
आजदेखि पशुपति क्षेत्रका सबै मन्दिर बन्द १८ मिनेट पहिले
कोभिड खोप लगाएका र पहिले पनि संक्रमण देखिएका वीर अस्पतालका १५ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित २२ मिनेट पहिले
बिरामीका लागि कर्णालीमा एम्बुलेन्स र हेलिकोप्टर व्यवस्था २४ मिनेट पहिले
भेषभूषामा सजिएका आमा समूह २७ मिनेट पहिले
गोरखामा नगद चोरी गरी फरार युवक पक्राउ ३१ मिनेट पहिले
दुधौलीका तीन वडा एक हप्ताका लागि बन्द ३४ मिनेट पहिले
फेवातालमा माछापुच्छ्रेको छायाँ ३७ मिनेट पहिले
२४ वर्षपछि सडक कालोपत्र हुँदा स्थानीयमा खुशी ४० मिनेट पहिले
राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आब्हान ५४ मिनेट पहिले
पूर्व सभापति न्यौपानेको निधनमा डा.शेखरद्वारा दुःख व्यक्त ५५ मिनेट पहिले
राजविराज विमानस्थल दुई साताका लागि बन्द ५५ मिनेट पहिले
परम्परागत मौलिक राधाकृष्ण नाच प्रस्तुत गर्दै कलाकार २३ घण्टा पहिले
बुकिङ भएका होटल धमाधम रद्द हुन थाले २२ घण्टा पहिले
बादल राष्ट्रिय सभा सदस्य र मन्त्रीबाट पदमुक्त ५ दिन पहिले
सामाजिक दूरी कायम राखी कालिका मन्दिरमा भक्तजनको दर्शन ३ दिन पहिले
शेयरबजारमा निफ्रा, मेगा र एनसीसी बैंकको शेयरमा करिब १७ लाख बढी कित्ता माग, कुनको कति ? २० घण्टा पहिले
ब्राजिलमा संक्रमणबाट मार्चमा मात्रै ६६ हजारको मृत्यु ३ हप्ता पहिले
भारतमै कोरोना पुष्टि भएका युवकको दैलेखमा मृत्यु ५ दिन पहिले
तत्काल विद्यालय बन्द नगर्न मन्त्रालयलाई प्याब्सनकाे सुझाव २ हप्ता पहिले
क्रिकेटर तेन्दुलकर कोरोनालाई जित्दै घर फर्किए २ हप्ता पहिले
धरानमा सुनसरीकी संक्रमित महिलाको मृत्यु २ दिन पहिले
मायाखोला हाईड्रोपावरको शेयर बिक्री प्रवन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त ४ हप्ता पहिले
एकीकृत घुम्ती शिविर : एकै दिन ५०० जनालाई नागरिकता २ वर्ष पहिले
मालदिभ्समा कोभिडका संक्रमित ६ हजार नाघे ८ महिना पहिले
प्रभु बैंकद्वारा तालबाराही मन्दिर गुठी ब्यवस्थापन समितिलाई क्यू आर कोड प्रदान २ महिना पहिले
यसरी हेर्नुहोस् सिंगटी हाइड्रोको आईपीओ रिजल्ट २ हप्ता पहिले